Igama lesiqhelo: fenugreek (FEH igreek entsha)
Iifom zedosi: Iphilisi yomlomo (610 mg)
Udidi lweziyobisi: Iimveliso zemveliso
By Uhlaziye ngu-Varixcare.cz ngo-Sep 16, 2020. Ibhalwe nguCerner Multum.
IFenugreek sisityalo esaziwa njengeAlholva, Unyawo lwentaka, iBockshornklee, iBockshornsame, Chandrika, Fenogreco, Foenugraeci Semen, Greek Clover, Greek Hay, Greek Hay Seed, Hu Lu Ba, Medhika, Methi, Sénégrain, Trigonella, Woo Lu Bar, kunye amanye amagama.
I-Fenugreek isetyenzisiwe kolunye unyango njengoncedo olunokubakho ekwehliseni amanqanaba eswekile yegazi emva kokutya kubantu abanohlobo 1 okanye uhlobo lwe-2 yeswekile .
I-Fenugreek iye yasetyenziswa kwelinye iyeza ukunyanga isilungulela , cholesterol ephezulu , ukuhla ukusinda , isisu esimoshakele , ukuqhina , 'ukuqina kwemithambo ( isifo semithambo ), isifo, iingxaki zesondo, umkhuhlane, yinkqayi , ukwandisa imveliso yobisi lwebele, kunye nezinye iimeko. Nangona kunjalo, olu setyenziso aluboniswanga ngophando.
Akuqinisekanga ukuba i-fenugreek iyasebenza ekunyangeni nayiphi na imeko yonyango. Ukusetyenziswa kwamayeza kwale mveliso akuvunyelwanga yi-FDA. I-Fenugreek ayifanele isetyenziswe endaweni yamayeza amiselweyo ngugqirha wakho.
I-Fenugreek ihlala ithengiswa njengesongezo semifuno. Akukho milinganiselo yokuveliswa ilawulwayo kwindawo yeekhompawundi ezininzi kwaye ezinye izongezo zentengiso zifunyenwe zingcoliswe zizinyithi ezinetyhefu okanye ezinye iziyobisi. Izongezo zemithi / zempilo kufuneka zithengwe kumthombo othembekileyo ukunciphisa umngcipheko wongcoliseko.
I-Fenugreek inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo semveliso.
Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yemveliso kunye nephakheji. Xelela umboneleli wakho ngamnye wezempilo malunga nazo zonke iimeko zakho zonyango, Ukungabikho komzimba , nawo onke amayeza owasebenzisayo.
Ngaphambi kokusebenzisa i-fenugreek, thetha nomboneleli wakho wezempilo. Awunakukwazi ukusebenzisa i-fenugreek ukuba uneemeko ezithile zonyango.
Ngaba i-mucinex dm inyusa uxinzelelo lwegazi
Buza ugqirha, usokhemisti, okanye omnye umboneleli wezempilo ukuba ngaba kukhuselekile kuwe ukuba usebenzise le mveliso ukuba unayo:
iswekile esezantsi yegazi amanqanaba ( hypoglycemia ); okanye
ukopha okanye ukuphazamiseka kwegazi.
I-Fenugreek ithathelwa ingqalelo kusenokwenzeka ukuba ayikhuselekanga ukusebenzisa ngexesha lokukhulelwa. Sukuyisebenzisa le mveliso ngaphandle kwengcebiso kagqirha ukuba ukhulelwe.
I-Fenugreek ithathelwa ingqalelo kusenokwenzeka ukuba ayikhuselekanga ukusebenzisa ukuba uncancisa usana. Sukuyisebenzisa le mveliso ngaphandle kwengcebiso kagqirha ukuba uncancisa umntwana.
Musa ukunika nasiphi na isongezelelo sempilo / sonyango emntwaneni ngaphandle kwengcebiso zonyango. I-Fenugreek isenokungakhuselekanga ebantwaneni.
Ndingayithatha njani i-fenugreek?
Xa ujonga ukusetyenziswa kwezongezelelo zemifuno, khangela ingcebiso kugqirha wakho. Unokucinga ngokubonisana nengcali eqeqeshwe ekusebenziseni izongezo zemifuno / yezempilo.
Ukuba ukhetha ukusebenzisa i-fenugreek, yisebenzise njengokuyalelwa kwiphakheji okanye njengokuyalelwa ngugqirha, usokhemesti, okanye omnye umboneleli wezempilo. Sukusebenzisa ngaphezulu kwale mveliso kunokuba kucetyisiwe kwileyibhile.
Sukusebenzisa iifomugreek ezahlukeneyo (ezinje ngamacwecwe, ulwelo, kunye nezinye) ngaxeshanye, ngaphandle kokuba ujoliswe ngqo kukwenza oko ngugqirha. Ukusebenzisa imixube eyahlukeneyo kunye kwandisa umngcipheko libanda.
Fowunela ugqirha wakho ukuba imeko oyinyanga nge-fenugreek ayiphucuki, okanye ukuba iya isiba mandundu ngelixa usebenzisa le mveliso.
I-Fenugreek inokuchaphazela i-clotting yegazi kwaye inokunyusa umngcipheko wokuphuma kwegazi. Ukuba ufuna utyando, umsebenzi wamazinyo, okanye inkqubo yezonyango, yeka ukuthatha i-fenugreek ubuncinci iiveki ezi-2 ngaphambi kwexesha.
Tsiba idosi ephosiweyo ukuba phantse ilixesha ledosi yakho ehleliweyo elandelayo. Sukusebenzisa i-fenugreek eyongezelelweyo ukwenza idosi ephosiweyo.
Yintoni ekufuneka ndiyiphephe ngelixa ndithatha i-fenugreek?
Landela imiyalelo yomboneleli wezempilo malunga nayiphi na imingcele yokutya, iziyobisi, okanye umsebenzi.
Kunqande ukusebenzisa i-fenugreek kunye nezinye izongezo zemifuno / zempilo ezinokuchaphazela negazi. Oku kubandakanya iingelosi ( dong quai ), capsicum, clove, danshen, igalikhi, ijinja , ginkgo , chestnut ihashe , panax ginseng , poplar, clover ebomvu, wabona i palmetto , I-turmeric , kunye nomngcunube.
Gwema ukusebenzisa i-fenugreek kunye nezinye izongezo zemifuno / zempilo ezinokunciphisa iswekile yegazi, enje i-alpha-lipoic acid , chromium, Uzipho lukaMtyholi , ikonofile, igum itsheri, ihashe chestnut, iPanax ginseng, iglasi , Ginseng yaseSiberia, kunye nezinye.
Iziphumo ebezingalindelekanga zefenugreek
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unayo iimpawu uxabane: urhwebo ; ubunzima bokuphefumla; ukudumba kobuso bakho, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
Nangona ingezizo zonke iziphumo ebezingalindelekanga ezaziwayo, i-fenugreek icingelwa ukuba inokukhuseleka xa ithathwa ixesha elifutshane.
Yeka ukusebenzisa i-fenugreek kwaye ubize umnikezeli wakho wezempilo kwangoko ukuba unayo:
iimpawu zehypoglycemia enzima: ubuthathaka obukhulu, ukudideka, ukuthuthumela, ukubila, ukukhawuleza kwentliziyo , unengxaki yokuthetha, isicaphucaphu , ukugabha , ukuphefumla ngokukhawuleza, ukuphelelwa ngamandla, nokubamba (ukuxhuzula); okanye
ukugruzuka okanye ukopha okungaqhelekanga.
urhudo , isisu esibuhlungu , irhasi;
'imephu yesiraphu' yevumba kumchamo.
yintoni iipilisi ze-ranitidine
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela fenugreek?
Ezinye iziyobisi zingasebenzisana ne-fenugreek, kubandakanywa amayeza kunye neyeza-counter-counter, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Xelela umboneleli wakho ngamnye wezempilo malunga nawo onke amayeza owasebenzisayo ngoku nangawo nawaphi na amayeza owaqala ngawo okanye oyeka ukuwasebenzisa.
Musa ukuthatha i-fenugreek ngaphandle kweengcebiso zonyango ukuba usebenzisa naliphi na la mayeza alandelayo:
amayeza seswekile: glimepiride ( Amaryl ), glyburide (IDiaBeta, iGlynase PresTab, IMicronase ), insulin , mzantsiweb ( KwiZenzo ), Rosiglitazone (Avandia), chlorpropamide (Diabinese), glipizide ( Iswekile yeglucotrol , tolbutamide (Orinase), kunye nabanye;
amayeza acothisa ukujiya kwegazi: iwarfarin ( Coumadin ), Iasprini , clopidogrel ( IPlavix ), diclofenac ( I-Voltaren , ICataflam ), ibuprofen ( Yimbi , Imotrin , Abanye), iqeqsha ( Anaprox , UNaprosyn , Abanye), dalteparin (UFragmin), enoxaparin ( Imvelaphi ), heparin , kunye nabanye.
Olu luhlu alugqitywanga. Ezinye iziyobisi zingasebenzisana ne-fenugreek, kubandakanywa amayeza kunye neyeza-counter-counter, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Ayilulo lonke unxibelelwano olunokwenzeka oluluhlu kwesi sikhokelo semveliso.
Nxibelelana neengcali zokhathalelo lwempilo ngaphambi kokusebenzisa nasiphi na isongezelelo semifuno / sempilo. Nokuba uphathwa ngugqirha okanye ngugqirha oqeqeshiweyo ekusebenziseni amayeza / izongezo zendalo, qiniseka ukuba bonke ababoneleli bakho bezempilo bayazi ngazo zonke iimeko zonyango kunye nonyango lwakho.
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 6.02.
idosi ephakanyisiweyo ye-melatonin
Iziphumo zecala le-zyrtec kubantu abadala
iinxalenye zeplagi yintlantsi
Ayikwazi ukwenza inqindi